Mgbe Instagram dọrọ aka na ntị ma ọ bụrụ na ị nweta nseta ihuenyo 🥇 Ndị na-eso ụzọ ▷ 🥇
Mgbe Instagram dọrọ aka na ntị ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo
Ọ bụ na ọ bịaghị na ụfọdụ mgbe ị hụla ihe na-atọ ụtọ ịchọrọ igosi onye ọzọ? Otu nhọrọ kachasị dị mfe maka ịchekwa posts na mkparịta ụka bụ nseta ihuenyo. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile na-atọ ụtọ na ndị dere ọdịnaya ị weghaara ga-achọpụta na ịmeela otu. Ajụjụ dị mkpa bụ,mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo? Anyị ga-akọwara gị ya n’okpuru.
N'ihi na ọ dịghị onye bụ ihe nzuzo na Instagram A na-emelite ya mgbe niile, na-ewetara ngwaọrụ ọhụụ na atụmatụ ọhụụ. Ọ dị ka nke ahụ, nke dị kemgbe afọ 2018 mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo. Agbanyeghị, ọ mechara laghachi mkpebi ahụ wee kpebie ịkwụsị ịgwa ndị ọrụ mgbe mmadụ mere nseta ihuenyo. Ya mere echegbula, ọ naghịzị mfe ịmata mgbe ị meziri nseta ihuenyo nke ụfọdụ ọdịnaya.
Kedu mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị were nseta ihuenyo?: Nseta ihuenyo
Isi ihe bụ ịmata ihe nseta ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụghị ihe siri ike nghọta taa. Nseta ihuenyo bụ naanị foto ma ọ bụ onyonyo nwere ike ibute site na ama ma ọ bụ kọmputa. Na onyonyo a, ị nwere ike ịlele ihe ndị jidere mmasị gị, yana ihe niile mejupụtara foto.
Dị ka ọ na-adịkarị, a na-eji nseta ihuenyo echekwa foto ma ọ bụ mkparịta ụka dị mkpa maka ndị ọrụ. Agbanyeghị, ọ nwere akụkụ na-adịghị mma, nke bụ na ogo onyonyo ga-adị ala karịa foto mbụ. Mgbe ndị ọrụ netwọkụ na-ahụ maka mmekọrịta chọpụtara mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo, e ji obere. Agbanyeghị, anyị amaraworị na ikpo okwu wepụrụ atụmatụ a.
Ugbu a, site na mmalite amabeghị ya otu esi arụ ọrụ Instagram ọhụrụ a. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ọrụ na-eche mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ niile anabataghị njirimara ọhụụ a, kama ọ rụrụ ọrụ maka ụfọdụ ndị ọrụ. N'adịghị ka ihe onye ọ bụla chere, mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo ọ na-emetụta ya na Direct naanị. Nke ahụ bụ, njirimara a na-arụ ọrụ naanị ịdọ aka ná ntị nke nseta ihuenyo mere na ozi nkeonwe.
Dịka anyị kwurula, ọtụtụ ndị ọrụ enweghị afọ ojuju maka arụmọrụ netwọrụ na-arụ ọrụ; otu o sila dị, nke a mere mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo. Ugbu a, dị ka a maara nke ọma, n'ihi ọtụtụ mkpesa ewepụtara, Instagram kpebiri iwepu ọrụ a.
May nwere ike ịmasị ịmata: Ebee ka Instagram Direct dị?
Etu esi ewere nseta ihu igwe na Instagram?
Ihe mbu ị kwesiri iburu n’uche mgbe ị na-enyo enyo ma ọ bụ nseta ihuenyo, bụ ịmata ụdị ekwentị ị nwere; Ọ ga-adabere na iwu enyere gị aka ịme ya. Ya mere, site na edemede a ebum n’uche igosi gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nseta ihuenyo dị na ngwaọrụ dị iche iche.
N'ihi mkpali kpatara nsọpụrụ mgbe ịdọ aka na ntị Instagram ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo, ọtụtụ ndị ọrụ achọpụtala ụzọ dị iche iche esi arụ ha n'enweghị onye mata. Ugbu a, ọ bụ ezie na ewepụrụ ihe a na Instagram; Anyị ga-egosi gị otu esi eme nseta ihuenyo onwe gị site na ngwaọrụ dị iche iche.
Nseta ihuenyo na ngwaọrụ gam akporo
Iji mee nseta ihuenyo site na ngwaọrụ gam akporo, ị ga-eburu n'uche ụdị ama nke ị nwere. Dabere na nke a, ị nwere ike ịghọta site na ngwaọrụ ndị ị nwere ike ịme nseta ihuenyo na mkpanaka gị. Na-esote, anyị ga-akọwa ụzọ isi jiri ama ndị ama ama kachasị eji sistemụ arụmọrụ a arụ ọrụ:
N'ihe banyere na ị nwere ụdị ama a, ị ga-aga ike na olu ala bọtịnụ; pịa ha maka ihe dika 3 sekọnd na voila! Ga-enyo enyo.
N'okwu a, site na ngwaọrụ HTC ị ga - achọta nhọrọ iji wedata olu dị ala ma gbanye ihuenyo n'otu ụzọ ahụ. Pịa bọtịnụ ndị a n'otu oge iji nweta nseta ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo.
Ọ bụrụ na n'ụzọ dị iche, ịnwere ama si Samsung nso; must ga-ahụrịrị akara mmalite na bọtịnụ ike. Dị ka ọ dị na ọtụtụ ekwentị, ị ga-pịa ha n'otu oge iji nweta nseta ihuenyo ahụ. N'ọnọdụ, ọ bụrụ na enwere nhazi mmeghari nke na-emegharị emegharị, ịnwere ike iwe ihuenyo nseta ahụ site na nanị ibugharị azụ aka gị na ihuenyo ahụ. Na ngwaọrụ ndị ọzọ dị elu, dị pịa bọtịnụ ike ma wedata olu n'otu oge.
N'ihe banyere ngwaọrụ Xperia, usoro a gbanwere ntakịrị. Na ngwaọrụ ndị a, naanị ị ga - achọta ma jide nhọrọ ike ruo ọtụtụ sekọnd. Nke a ga-eme, windo mmapụta ga-emepe na ọtụtụ nhọrọ, họrọ nke ị ga-enweta nseta ihuenyo ma ọ bụ ya!
Maka ngwaọrụ ndị a, ị ga-achọpụtakwa ike na bọtịnụ ala, na-pịa ha n'otu oge. Ugbu a, ọ bụrụ na ịnwere ngwaọrụ dị elu, ị ga-enwe nhọrọ ịhazi iwu ndị ahụ n'onwe gị, ịnweta enyo nseta ihuenyo ozugbo ị jiri ihu gị wee pịa ihuenyo ahụ ugboro abụọ.
Nseta ihuenyo na ngwaọrụ iOS
N'otu ụzọ ahụ, dị ka enwere ụzọ iji me nseta ihuenyo site na sistemụ arụmọrụ gam akporo, ha dịkwa adị maka oke nke iOS na iPhone. Ugbu a, iji were nseta ihuenyo site na ngwaọrụ a, ị ga-eburu n'uche ụdị ama nke ị nwere.
N'ime ụdị kachasị dị ugbu a, ọ ga-ezu iji idobe ike na bọtịnụ olu ruo ọtụtụ sekọnd. Agbanyeghị, n'ihe banyere ụdị nke ka na-eji “Home Button”, naanị ihe ị ga - eme bụ ịgbanye iwu a, ya na bọtịnụ ike ruo ọtụtụ sekọnd.
Kedu otu esi achọpụta onye na-eme nseta ihuenyo na Instagram?
Mgbe Instagram dọrọ aka na ntị ma ọ bụrụ na ị na-enyo ihuenyo, bụ site na ngosi banyere ozi nkeonwe. Ugbu a, dị ka anyị kwuru na mbụ, Instagram kwụsịrị ịgwa gị ma ọ bụrụ na ịnyo nseta ihuenyo nke ọdịnaya onye ọrụ ọzọ, ma ọ bụ mkparịta ụka. Nke a bụ n'ihi mkpesa na-enweghị atụ ewepụtara mgbe arụmọrụ ọhụrụ a pụtara.
Ọ dị mkpa ịmara na mgbe usoro ntanetị nke Instagram mepụtara nhọrọ a iji kpuchido nzuzo nke ndị ọrụ ya; Ọtụtụ esemokwu bilitere. Ugbu a, ndị kasị mepụta ihe, dabere na usoro ọhụrụ a, họọrọ ịnyo nseta ihuenyo na kọmputa ha.
Ọ bụ ya mere Instagram jiri mebie mmelite ọhụrụ a wee wepu ya n'elu ikpo okwu. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ha ga-enwekwu afọ ojuju na afọ ojuju na nzuzo nke ọdịnaya ha. Ugbu a, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe ntanetị nke Instagram na-emelite kwa oge ọ bụla, o kwesịghị iju anyị anya na netwọk mmekọrịta na-arụpụta ihe ọhụụ metụtara nchedo nzuzo nke ndị ọrụ ya.
Nseta site na kọmputa: Ahapụla gị!
Ka ị na-agụ ya, otu n’ime nhọrọ ndị ọzọ na nseta ihuenyo ọdịnala, bụ iwere nseta ihuenyo na kọmputa. Nke a bụ nhọrọ ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe, nke ga - enyere gị aka ịchekwa onyonyo ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla ị na - ele na Instagram. Nanị ọghọm nke a bụ na ihe onyonyo a ga-enwe obere ala.
N'otu ụzọ ahụ, enwere ike ịkọwa ya na Windows bụ otu n'ime sistemụ arụmọrụ kachasị emeghe ma na-eji ugbu a; O nwere ọtụtụ uru. Ọ dị otu a, ị ga-ahụ ọtụtụ ngwaọrụ ga-enyere gị aka ịhazi kọmputa gị, yana sọftụwia ị nwere ike iji.
Nseta ihuenyo dị mfe!
Ọbụlagodi na ịchọpụtabeghị, imirikiti kọmputa nwere bọtịnụ akọwapụtara nke iji were seta ihuenyo. Ọnọdụ nke igodo ma ọ bụ bọtịnụ kwuru ga-adabere na ndị nrụpụta nke ika ahụ. Agbanyeghị, ọnọdụ ya na-abụkarị n'akụkụ aka nri nke kọmputa.
Iji jiri nhọrọ a, ị nwere ịpị igodo kwekọrọ; Ọ na - enwekarị aha "ImpPnt Pet Sis". Ozugbo ị pịa ya, a ga-emepụta nseta ihuenyo ozugbo. Ugbu a, iji chọta ya, ị ga-aga menu “akụrụngwa”, tinye “Onyinye” ma pịa “Nseta ihuenyo” n’otu n’otu.
N'otu ụzọ ahụ, enwekwara isi ọzọ maka nhọrọ a; Ma, oburu na i pinye okpukpu abuo n’elu, inwere ike ihu otu nhọrọ nke gha enyere gi aka degharia nseta ihuenyo gi N'etiti nhọrọ enyere bụ: Kpoo ihe onyonyo a, mepụta vidiyo dabere na ya, sere na ya, n'etiti ndị ọzọ.
Ugbu a, ị nwekwara ike iji nhọrọ ndị ọzọ iji were nseta ihuenyo site na kọmputa gị. Nwere ike nweta nke a site na mgbakwunye Google Chrome yana yana iji mkpakọ igodo na kọmputa gị.
N'ime mkpokọta ndị a anyị hụrụ igodo Windows na njikọ nke impr Pant, site na ya ị ga - eme nseta ihuenyo ma chekwaa ya dị ka faịlụ. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​ga - ahụta njikọta nke Alt na njikọ yana impr Pant ma nke a ga - enye gị nhọrọ ịme nseta ihuenyo naanị nke windo na - arụ ọrụ.
Kedu egwu ị gere na instagram
Mgbe Instagram na-akwụ gị ụgwọ